Hoyga Wararka Marar | Sacuudiga Taliyayaashii Ugu Sarreeyay Ciidamada Wadanka oo Shaqadii laga eryay
Sacuudiga Taliyayaashii Ugu Sarreeyay Ciidamada Wadanka oo Shaqadii laga eryay
Qoyska talada haya ee wadanka Sacuudiga ayaa isbedel ballaaran ku sameeyay taliyaasha kala duwan ee ciidamada wadanka xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in inqilaab loo maleegayo Max’med Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha ugu awoodda Badan Sacuudiga.
Wareegto boqortooyo oo kasoo baxday Salmaan Bin Cabdi Caziiz ayaa xilalkii ay hayeen looga qaaday dhammaan taliyaasha ciidamada waxaana kujira taliyaha ugu sarreeya ciidamada qalabka sida, taliyaha ciidamada lugta iyo taliyaha ciidamada cirka.
Jeneraal Cabdi Raxmaan Bin Saalix Al-bunyaan oo ahaa taliyaha guud ee ciidanka Sacuudig ayaa shaqada laga eryay waxaana lagu bedelay Jeneraal Fayaad Bin Xaamid Alzuweylli, sidoo kale waxaa shaqada laga eryay Jeneraal Mux’med Bin Ciwad oo ahaa taliyaha ciidanka cirka waxaa lagu bedelay Turki Bin Bander Bin Cabdul Caziiz.
Bayaa kasoo baxay Boqorka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in tallaabadan qeyb ka tahay waxa loogu yeeray “Horumarinta wasaaradda difaaca’.
Isbedelkan lagu sameeyay melleteriga ayaa imaanaya xilli Max’med Bin Salmaan uu isbuucii lasoo dhaafay uyeertay 1000 askari oo katirsan melleteriga dalka Pakistan si ay inqilaab uga ilaaliyaan qoyska talada haya oo sanadadii dambe cadaadis kala kulmayay siyaasiyiin iyo maalqabeenno la ihaaneeyay.
Falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in dalka Sacuudiga uu wajahayo marxalad isbedel ah islamarkaana kumanaan culimo ah xabsiyada lagu guray, Bin Salmaan iyo saaxiibadiis ayaa doonaya in dhulka xarameynka ay ka hir geliyaan nidaam calmaani ah oo xiriir wanaagsan laleh Yahuudda.